Ukunikela kweBlue Groove Ball
Ukujikeleza mqengqeleki Ukunikela
Indlela yokujongana nesizathu sokubola kunye nokubola kwe-eccentric bearing
Umphezulu wendlela eccentric ethwele umhlwa wangaphambi kokuba unyangwe: umhlaba owomileyo: ucocekile ucoceko ungasetyenziselwa ukucoca umoya oxineneyo, okanye ngesomisi kwiqondo lobushushu eli-120 ~ 170 ° c, kwaye ekugqibeleni wome ngelaphu elicocekileyo. UMPHEFUMLO OCWELEYO: Ukucoca kufuneka kudityaniswe nohlobo lwe surfa ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkqubo yokufakwa kwe-tapered roller bearing
Ukufakwa kokufaka: ukufakela ukuthwala kufuneka kuqhutywe kwindawo eyomileyo necocekileyo. Phambi kofakelo, jonga ngononophelo indawo yokukhwelana kwe-shaft kunye neZindlu, iziphelo zamagxa, i-grooves, kunye nomgangatho wokuchaneka kweendawo zokudibanisa. Zonke iindawo zokudibanisa kufuneka ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhethwa kwebhola yeceramic kunye nemicimbi efuna ingqalelo
Okwangoku, eyona nto isetyenziswa kwisantya esiphakamileyo sokuthwala kukuthwala ibhola ye-ceramic, oko kukuthi, into eqengqelekayo isebenzisa ishushu eshushu okanye isostatic ngokucinezela ibhola ye-Si3N4 yodongwe, kwaye iringi ethwele isengumsimbi wentsimbi. Olu hlobo lokuthwala lunezinto zokubeka emgangathweni ophezulu, iphantsi ...Funda ngokugqithisileyo »
Precision technology ezibandayo ehlelayo of ring ring
Precision technology ezibandayo ehlelayo luhlobo lwendlela yokusebenza ebandayo bokwakha ukufumana iimveliso ogqityiweyo yi extrusion kunye neplastiki deformation ye iindawo thunzi rotary kwiqondo lobushushu igumbi. Precision ehlelayo ebandayo ungenza ubungakanani kunye nokumila workpiece kufutshane ixabiso theoretical th ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukongeza kumgangatho ogqwesileyo, ukubonakala kwangaphandle okungaphandle kukwayinxalenye echanekileyo. Ukuba ayisetyenziswanga ngokufanelekileyo kwinkqubo yokusetyenziswa, ayizukuphelela ekuphumezeni ukusebenza okulindelweyo, kodwa iya konakalisa ngokulula ukujikeleza okungaphandle. Kuya kufuneka sinike ingqalelo kwi ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: Jan-15-2021
Yintoni ephosakeleyo ngeebheringi? Ungayisombulula njani? Ekusetyenzisweni kwemveliso yezimbiwa zezityumzi, kuhlala kukho isando sokubamba, ukuba sithini isando? Into ebizwa ngokuba kukutshixa, kukuthwala kwinkqubo ye-r ...Funda ngokugqithisileyo »
Uvavanyo lokuthintela ukujikeleza kunye nokujikeleza kwezinto
Ukuvavanywa kokuBala ukuSula kunye nokuGuquguquka kweRotational Umlinganiso wokucaca kwe-radial yebhere yonke akukho lula. Amandla okulinganisa abangela i-ferrule kunye nomzimba oziqengqelekayo kunye nonxibelelwano lwayo ukuba lukhulu ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimfuno zomsebenzi wegrisi yeemoto
Iimfuneko zentsebenzo yeeMoto eziThoba iGrisi yokuthambisa igrisi luhlobo oluthile lweoyile yesiseko seoyile esenziwe ngokulungiswa yinkqubo ekhethekileyo, kwaye yongezwe ngezongezelelo zepatent zamva nje. Kusetyenziswa ngokukodwa ukuthambisa ...Funda ngokugqithisileyo »